एपीएफ टोलीद्वारा चोरीपैठारीको लत्ताकपडा बरामदपुर्वी–नवलपरासी, पुर्वी नवलपरासी जिल्लाको गंैडाकोट नगरपालिका १० स्थित पुर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट भाद्र २५ गते एपीएफ टोलीले करीव दुई लाख रुपैयाँ बराबरको लत्ताकपडा बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्वर ३१ गुल्म हेक्वा पुर्वी–नवलपरासीबाट खटिएको एपीएफ टोलीले बुटवलबाट काठमाडौंतर्फ आउदै गरेको ना. ५ ख २४६४ नम्वरको यात्रुवाहक बसमा जाँच गर्दा उक्त लत्ताकपडा फेला परेपछि बरामद गरिएको हो ।
पुर्वी–नवलपरासी, पुर्वी नवलपरासी जिल्लाको गंैडाकोट नगरपालिका १० स्थित पुर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट भाद्र २५ गते एपीएफ टोलीले करीव दुई लाख रुपैयाँ बराबरको लत्ताकपडा बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्वर ३१ गुल्म हेक्वा पुर्वी–नवलपरासीबाट खटिएको एपीएफ टोलीले बुटवलबाट काठमाडौंतर्फ आउदै गरेको ना. ५ ख २४६४ नम्वरको यात्रुवाहक बसमा जाँच गर्दा उक्त लत्ताकपडा फेला परेपछि बरामद गरिएको हो ।